Ama-constumpolar constellations: ayini futhi angayithola kanjani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Lapho sikhuluma ngayo izinkanyezi komkhathi singahlaziya izinhlobo ezahlukene. Olunye lwezinhlobo ezingaziwa kakhulu kodwa ezibaluleke kakhulu yilezi izinkanyezi eziyindilinga. Luhlobo lwe-constellation abantu abaningi abangalwazi kepha olubaluleke kakhulu. Zingaphansi kwamadigri angama-30 ukusuka esigcawini se-pole yezwe esenyakatho noma i-geographic south pole. Enye yezinkanyezi ezaziwa kakhulu kule nkanyezi yiPole Star.
Kulesi sihloko sizochaza konke odinga ukukwazi mayelana nemilaza eyizumbulu nokubaluleka kwayo.
1 Izici zezinkanyezi nemilaza
2 Imilaza eyindilinga yenkaba yezwe esenyakatho
3 Amaqoqo ezinkanyezi ezungeza umhlaba oseningizimu
Izici zezinkanyezi nemilaza
Uma sithi sihlaziya izinkanyezi sisho iqembu lezinkanyezi ezixhumene ngokungekho emthethweni futhi ezinesici esikhethekile. Futhi ukuthi zitholakala ngemigqa yokucabanga kanye nolayini abakwaziyo ukwakha isibalo, isithunzi noma ubujamo bezinto, abantu noma umdwebo ongabonakali. Kunezinhlobo eziningi zemilaza ngokuya ngobunjwa nenani lezinkanyezi eziyibumbayo. Kukhona ezinye izinkanyezi ezinesimo izinkanyezi ezingaphezu kwezingama-200 yize zivame ukuba nokuncane okuncane.
Ezinye kulula ukuzibona esibhakabhakeni ngenxa yezinkanyezi ezikhanyayo ezingaphansi kwenkanyezi efanayo futhi ezibizwa ngokuthi izinkanyezi ze-alpha. Izinkanyezi zomlaza owodwa zingaba yingxenye yezinye futhi zihlukaniswe ngezinhlobo ezahlukene. Imilaza eminingi ihlukaniswa kuye ngesimo esibhakabhakeni. Sine amaqoqo ezinkanyezi, amaqoqo ezinkanyezi aseningizimu, izinkanyezi zezinkanyezi nezinkanyezi zesifunda.
Imilaza ye-zodiac yaziwa kahle ngoba nayo inencazelo enkulu ngezimpawu zezinkanyezi nangezindaba ezinhle ezinganekwane. Izinkanyezi zomjikelezo yilezo ezisekungenani okungenani ngama-degree ayi-30 square ukusuka esigxotsheni esisenyakatho yezwe noma i-geographic south pole. Yizo eziseduze kakhulu nezigxobo. Enye yezinkanyezi okungokwala maqoqo ezinkanyezi adume kakhulu emhlabeni inkanyezi yepali.
Imilaza eyindilinga yenkaba yezwe esenyakatho
Sizohlaziya izinkanyezi eziyisi-8 ezisesiyingi ze-Arctic Circle, ezisendaweni esenyakatho nezindawo ezisenyakatho kakhulu.
I-Bear enkulu: Yilelo zinkanyezi elaziwa ngegama elithi Ursa Major, ngoba yigama lalo lesiLatini. Yaziwa kakhulu esibhakabhakeni sonke. Kungabonakala unyaka wonke enyakatho Nenkabazwe futhi iqukethe cishe izinkanyezi ezingama-209 zazo eziyi-18 zazo okuyizona eziyinhloko.
Ibhele elincane: Ngenye yezinkanyezi ezaziwa kakhulu emhlabeni futhi yakha omunye wabamele kakhulu inyakatho yezwe. Inezinkanyezi ezi-7 kuphela ezakha isigaxa sebhala noma lemoto, yingakho ibizwa nangokuthi i-constellation yemoto. Itholakala enyakatho ye-hemisphere kanti inkanyezi ye-pole itholakala lapho. Yiyo esiza ukukhomba njalo isigxobo sendawo esenyakatho futhi akunakwenzeka ukubheka kusuka eningizimu yezwe.
ICassiopeia: ingenye yezinkanyezi eziyingxenye yekhathalogi enkulu kaPtolemy. Kuyinkanyezi eyakhiwe izinkanyezi eziyisi-5 ezinkulu ezime ngo-M noma ngo-W, imikhawulo yazo ikhomba inkanyezi ye-pole esenyakatho. Le nkanyezi iseqenjini lamaqoqo ezinkanyezi anamuhla angama-88. Itholakala esibhakabhakeni esisenyakatho se-circumpolar.
Inkanyezi yePole North: Yinkanyezi ekhanyayo eyayiseduze kwesigxobo sendawo esenyakatho. Namuhla siyabona ukuthi lesi sikhundla simbozwe yinkanyezi uPolaris nayo eyaziwa ngegama lika-Alpha Ursa Minoris. It kungokwalabo constellation Ursa Minor futhi iyona bhá kubo.
Amaqoqo ezinkanyezi ezungeza umhlaba oseningizimu
Ezingxenyeni eziseningizimu izinkanyezi zeskyumpolar zibizwa nangokuthi ama-meridians futhi zikhona kuphela ezinkanyezini eziyisi-6 ezikwazi ukubonakala njenge-hemisphere protagonist. Ake sihlaziye ngamunye wabo:
I-Crux: yaziwa ngegama lomlaza weSiphambano SaseNingizimu, lokhu kungenye yezindawo ezidume kakhulu eSouth Pole. Isetshenziselwa ukuthola isigxobo saseningizimu senkanyezi esabalele kakhulu. Inkanyezi ekhanya kakhulu kule nkanyezi ibizwa ngokuthi i-Acrux. Le nkanyezi yakhiwa izinkanyezi ezi-4 ezinkulu futhi iyinkanyezi encane kunazo zonke izinkanyezi ezisesibhakabhakeni namuhla.
UCarina: Ingenye yezinkanyezi ezaziwa kakhulu ngaphambili ezakha iqoqo elikhulu leNave Argos. Yahlukaniswa yaba eminye imikhosi engama-4 eyaziwa ngamagama kaVela, uPuppis, uPyxis noCarina. Le nkanyezi inenkanyezi yesibili ekhanyayo esibhakabhakeni sonke. Kuyaziwa ngegama lika-Alpha Carinae. Ngaphakathi kwalesi sihlabani kunenkanyezi iCanopo. Leli gama livela kumatilosi kaMeneus, inkosi yaseSparta.
ISouth Pole Star: sOkwamanje yaziwa ngegama le-Meridian Polar Star. Lokhu kusho ukuthi itholakala eningizimu yezwe ikakhulukazi endaweni eseduze nendawo yezwe eningizimu. Yize le nkanyezi ingabonakali kahle kepha kufanele ibonwe ngaphakathi kwenkanyezi yeCruz del Sur. Inenkanyezi ebalulekile eyaziwa njengePolaris Australis.
Izinkanyezi zomjikelezo zinama-curiosities njengoba kwenzeka ukuthi sihlale siwabona. Zingahlaziywa nganoma yisiphi isikhathi sosuku, uma kungenjalo ngelanga. Ngaphezu kwalokho, zingabukwa nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Babizwa kanjalo ngoba basezindaweni zama-hemispheres eduze nezigxobo futhi bazungeza inkanyezi ye-pole.
Ngenxa yokujikeleza komhlaba kweplanethi yethu kusinikeza umuzwa wokuthi isibhakabhaka naso sizungeza izingongolo zasezulwini. Lokhu kwenza sikubone lokho izinkanyezi zibonakala ziphenduka ngokuphelele njalo emahoreni angama-24. Kuleli thuba sifaka nenkanyezi yesigxobo, yize ingekho ngqo esigxotsheni sezulu elisenyakatho. Kodwa-ke, ichaza umjikelezo ozungeze isigxobo ongacishe ubhekwe.
Ngokuya ngobubanzi esikuzo manje kwezinye izinkanyezi ezizobhala i-arc esibhakabhakeni, kuyilapho kuzoba nezinye ezizochaza ukuzungeza okuzungeze isigxobo sasezulwini, lawa ngamaqoqo ezinkanyezi.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nemilaza eyizumbulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Amaqoqo ezinkanyezi ayisiyingi